Yakawanda Sei Kuburitsa Zvemagariro Media Mari | Martech Zone
China, Kukadzi 9, 2017 China, Kukadzi 9, 2017 Douglas Karr
Aya mavhiki mashoma apfuura, tanga tichiongorora zvigadzirwa nemasevhisi atinopa vatengi vedu. Sesangano, isu tine hupfumi hwechiyero mukushanda nematurusi uye hunyanzvi hwatinogona kugovera pakati pevatengi - asi izvo zvakanaka zvinofanirwa kuenderera nekuwedzera kukosha kwakaringana kuitira mitengo yemumiririri. Hatina chokwadi chekuti vashandi vemukati vanogona kuenzanisa mhedzisiro yatinowana nemari yakaenzana kune vatengi vedu.
Zvakadaro, mitengo yedu yanga isingaenderane neavhareji indasitiri. Kune mamwe masevhisi edu, taibhadharisa zvakawanda uye tainzwa kugadzikana kupihwa mhando yebasa redu. Kune mamwe masevhisi, isu taibhadharisa zvishoma zvishoma uye nekuvimbika takadzivirira iwo marudzi ekubatana nevatengi. Imwe yeaya masevhisi yaive enhau enhau. Zvemagariro midhiya haisi yekuzvigadzirira maitiro. Zvemagariro midhiya zvinoda kuongororwa, kutsigirwa, kukura, kusvika kunze, kusimudzira, kuita, kuongorora, kubatanidza, pamwe makwikwi uye kunyange kukwidziridzwa kwakabhadharwa.
Sangano rinobudirira munhau rezvemagariro rinoda kushanda nesimba nguva dzose uye manpower ekuzadzisa simba uye mhedzisiro. Izvi zvinoda vashandi vane tarenda vari kuramba vachitsvaga mikana.
Mune ino infographic, Maitiro Ekuita Nani Kushandisa Yako Yemagariro Media Kushambadzira Budget, Salesforce Canada inotsvaga mutengo wekushandisa pasocial media zano.
Nyanzvi dzekutengesa mabasa dzinogona kumhanya pakati pe $ 4,000 ne $ 7,000 pamwedzi. Sezvo yako yakazara yekushambadzira bhajeti inofanira kunge iri pakati peinenge gumi muzana yemari yako yese, uye kushambadzira kwako kwedhijitari chikamu chakakosha, vashambadziri vanofanirwa kusarudza marongero avanogona kuita maakaundi enhau. Sarudzo dzakakurumbira ndedzekuhaya maneja wezvemagariro, kambani diki yekutengesa, kana kambani inoshambadzira.
Zvemagariro venhau hazvisi kuenda chero kupi. Muchokwadi, zvemagariro enhau bhajeti inofungidzirwa kuti ichawedzera ne90% mumakore mashanu anotevera Pasina kupokana zvizhinji zveizvi zvinokonzerwa nekuoma kwenzira, kuwedzera kwemakwikwi, uye kudiwa kwekudyidzana kwe5: 1.
Tags: b2b midhiya enhaub2c midhiya enhauBloggingFacebookforumgoogle mapokaInstagramLinkedInKushambadzira Vhidhiyochishamisokugovana kwemifananidzoPinterestpodcastingsalesforce canadasocial bookmarkingevanhu vezvenhaupasocial media budgetsocial media mutengoSocial Media Marketingpasocial media kushambadzira bhajetipasocial media outsourcepasocial media roipasocial media vhidhiyoTwittermavhidhiyo
Maitirwo evatengesi veB2B Anofanirwa Kukwira Kumusoro Maitiro Ekushambadzira Ezvinhu